Shijiazhuang Teneng elektrika Mechanical Equipment & Co., Ltd
Shijiazhuang Teneng elektrika Mechanical Equipment & Co., Ltd. no arak'asa welded mpanamboatra ny famokarana vy sodina tsipika, tsipika forming mangatsiaka horonan-taratasy, slitting fitsipika, manapaka-to-tsipika lavany sy ny fitaovana mifandray mpanampy. Teneng orinasa no orinasa maoderina izay afaka ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana sy ny varotra. Teneng dia filankevitry ny mpikambana ao amin'ny China Roll fiforonana Association, ny filoham-pirenena mpikambana ao Hebei Steel Tube Trade Association.
Teneng milina no mahomby indrindra Tube orinasa mpamokatra entana fitaovana misy eo amin'izao tontolo izao. Ao Shina, ny mpampiasa fanta-daza no Hebei Jingye Group, SANY Group, China fanamboaran-tsambo Industry Corporation, Chongqing Changzheng Heavy Industry Co., Ltd sns
Teneng milina miasa amin'ny firenena maro hafa afa-tsy Sina, toy ny
American, Portugal, Venezuela, Brezila, Paraguay, Rosia, Ukraine, Japana, Arabia Saodita, Sodana, Uzbekistan, Kazakhstan, Vietnam, India, sy ny sisa. Teneng nahazo fiderana rehetra izao avy amin'ny mpanjifa manerana izao tontolo izao noho ny kalitao avo vokatra sy ny fivarotana tonga lafatra rehefa avy-fanompoana.
Customer fitakiana no mitondra fiara hery ny teknolojia fampandrosoana, orinasa matanjaka hery dia ny fanohanana ny lenta ny teknolojia. Teneng orinasa dia miara-miasa ao an-toerana sy any ivelany mba hanome mpanamboatra ny fitaovana faran'izay tsara, matihanina teknolojia, fanompoana tonga lafatra ho an'ny mpanjifa.
No. mpiasa : 150 ~ 200
Teneng orinasa manana an-tapitrisany metatra tora-droa ny orinasa, ary koa manana rafitra fandrindrana mafy ny welder sy bobongolo fanamboarana. Fitaovana fari ireo faritra malaza voafantina orinasa vokatra Nohatsaraina vokatra fampisehoana ny fiainana sy ny asa fanompoana. Avy singa fototra fanodinana ny fiangonana ny milina, manao taratasim-bola amin'ny ambaratonga rehetra, ka ento eo amin'ny rafitra ny famokarana andraikitra. Rehefa fanompoana manokana dia fampiofanana avy ny fanao, tafiditra amin'ny fanirahana fitaovana nandritra ny taona maro, mba hamahana olana isan-karazany eo amin'ny famokarana fomba fanao, tari-dalana fametrahana fitaovana sy ny fanofanana miasa amiko hampandroso ny mpanjifa.